ဘာသာစကားတွေ လေ့လာရာမှာ အထောက်အကူပြုမယ့် U-Dictionary – AsiaApps
Anubis ဆိုတဲ့ Trojan Virus ကို Google Play Store မှာ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့
ဖိုင်​​တွေကို လွယ်​ကူလျှင်​မြန်​စွာ လွှဲ​ပြောင်းပေးနိုင်​မယ့် Share it
နောက်နှစ်မှာ ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ ရှိနေတဲ့ NBCUniversal
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ Storage ဘယ်လောက်ထိကျန်သေးလဲ ပြသပေးနိုင်တဲ့ Google Play Store ရဲ့ feature အသစ်
App တစ်ခုတည်းနဲ့ ကမ္ဘာပတ်နိုင်မယ့် Guides by Lonely Planet
Apple ဟာ တကယ်ပဲ သင်ခန်းစာ မရသေးတာလား….
ကယ်လိုရီတွက်ပေးတဲ့ HiVision နည်းစနစ် ပါဝင်လာမယ့် Huawei Mate20
Redmi brand အတွက် Logo ကိုချပြပေးလိုက်တဲ့ Xiaomi
အရင်က စမတ်ဖုန်းတွေထဲ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ Vivo
Latest Apps & Smartphone News
ဘာသာစကားတွေ လေ့လာရာမှာ အထောက်အကူပြုမယ့် U-Dictionary
January 25, 2018 January 25, 2018 MoonReviewsNo Comment on ဘာသာစကားတွေ လေ့လာရာမှာ အထောက်အကူပြုမယ့် U-Dictionary
ယနေ့ ကျွန်မတို့ နေထိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက ဟိုးအရင်တုန်းကလို မကျယ်တော့ပဲ ကျဉ်ကျဉ်းလေးဖြစ်သွားပါပြီ။ အကြောင်းကတော့ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာ ကဏ္ဍ အရေးပါလာတာနဲ့အမျှ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ဆက်သွယ်နိုင်စေဖို့ ပေါင်းကူးပေးတဲ့ ဘာသာစကားကဏ္ဍကလည်း အရေးကြီး လာပါတယ်။ အကယ်၍ သင်က ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို
လေ့လာနေတဲ့သူဆိုရင် U-Dictionary apk က သင့်အတွက်အရမ်းကို အသုံးဝင်မှာပါ။
U-Dictionary ထဲမှာ လူသုံးများတဲ့ အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယားဘာသာစကားတွေအပြင် ဘာသာစကား၃၈မျိုးကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အဘိဓာန်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက conversation လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အနက်တူသံကွဲစကားလုံး (synonyms) ဂိမ်းများ၊ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေ့လာနိုင်မယ့် audio များ နှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတွေကိုလည်း သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာစကား ၃၈မျိုးထဲမှာ မြန်မာဘာသာမပါဝင်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အဘိဓာန်ကြည့်ချင်ရင် English to English ကိုပဲ လေ့လာလို့ရမှာပါ။ Apk ထဲမှာ British (UK) အသံထွက်နဲ့ American (US) အသံထွက် နှစ်မျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Word for Today ကနေလည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စကားလုံးအသစ်တွေ လေ့လာလို့ရပါတယ်။ Writing club ထဲဝင် join ပြီးတော့လည်း writing skill တိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ 4skills (speaking, reading, writing, listening) ကို တစ်နေ့ရာတည်းကနေ တိုးတက်အောင် လုပ်လို့ရတဲ့ apk ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ဝင်စားရင် သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်။
Android, iOS နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ Google Play ရဲ့ Best Self-Improvement App နဲ့ Best App ဆုကိုရရှိထားတာပါ။ Android အတွက် ထွက်ထားတာ ကြာနေပြီဖြစ်ပေမယ့် iOS အတွက်တော့ ၂၀၁၈ မှထွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Rating ပိုင်းကကြည့်ရင် Play store မှာ 4.5 နဲ့ App store မှာ 4.8 အထိရှိနေပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို App Store ကနေ
Image Source – U-Dictionary
Android, iOS, Smartphone app
Download ပြုလုပ်သူဦးရေ အနည်းငယ်သာ ရှိသေးပေမယ့် တကယ်အစွမ်းထက်တဲ့ VoiceTra app
အသံထွက်တဲ့ စတစ်ကာလေးတွေ ဖန်တီးနိုင်မယ့် DittyMoji – Holidays
View all posts by Moon →
CV form ကို smart phone နဲ့ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်မယ့် Application နှစ်ခု
4GB RAM နဲ့ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi 5!
JOB ANNOUNCEMENT !
Anubis ဆိုတဲ့ Trojan Virus ကို Google Play Store မှာ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ January 25, 2019
ဖိုင်​​တွေကို လွယ်​ကူလျှင်​မြန်​စွာ လွှဲ​ပြောင်းပေးနိုင်​မယ့် Share it January 23, 2019
နောက်နှစ်မှာ ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ဖို့ ရှိနေတဲ့ NBCUniversal January 22, 2019
ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ Storage ဘယ်လောက်ထိကျန်သေးလဲ ပြသပေးနိုင်တဲ့ Google Play Store ရဲ့ feature အသစ် January 22, 2019
App တစ်ခုတည်းနဲ့ ကမ္ဘာပတ်နိုင်မယ့် Guides by Lonely Planet January 16, 2019
Ah Wu Mee on Taylor Swift ရဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taylor Swift : The Swift Life!
App News (144)
Smartphone News (262)
Ads Alcatel Android Android Wear Apple Application Blackberry Deals Essential Facebook Firmware Updates Google Google Chrome Honor HTC Huawei Instagram iOS iPhone Lenovo LG local Motorola New Edition New Feature New model New update Nokia One Plus Oneplus OPPO Oreo Update Rumors Samsung Smartphone Smartphone app Sony State of Android Teaser Video Testing Version update Vivo Web browsers Xiaomi YouTube